China 9gb Series Mower ifektri kanye nabaphakeli | RY AGRI
Umshini wokugaya utshani we9GB uchungechunge usetshenziselwa ukuvuna utshani epulazini, ehlathini noma njengomhlaba wokulima.Usebenza egqumeni, insimu ethambekisayo noma insimu encane. Ilawula umshayeli kagandaganda futhi isebenza kahle, i-mower yonke ingaphakanyiswa yi-hydraulic pressure systerm lapho ugandaganda weqa umgoqo.
Amaphuzu amathathu ajwayelekile
Umshini wokugunda utshani obuyiselayo usika amafolishi ngokunyakaza okuhlobene kokucheba kommese ohambayo kanye nommese ohleliwe kumsiki.
Isici ukuthi izinhlanga zokusika zihlanzekile, amandla adingekayo ngeyunithi ngayinye ukusika ububanzi mncane, futhi ilungele indawo enotshani engokwemvelo kanye notshani bokufakelwa ngokukhipha okujwayelekile.
Ijubane lokusika lommese ohambayo ngokuvamile liphansi kune-3 m / s, futhi ijubane lokusebenza phambili ngokuvamile liyi-6 kuye ku-8 km / h.
Olandelayo: Umshini Wokujikeleza